Maraykanka Diblamaasiyiin Baaq Kasoo Saaray Xaaladda Cakiran - #1Araweelo News Network
“Trump waa in laga hor istaago inuu khatar dheeraad ah geliyo dalkeenna iyo dadkeenna.” Katherine Clark
Washington(ANN)-Daraasiin diblamaasiyiin Maraykan ah ayaa saxeexay xadhig kala duwan oo lagu weydiisanayo hogaaminta siyaasada arimaha dibada ee amaanka iyo danaha Maraykanka inay si cad ugu cambaarayso kicinta madaxweyne Trump ee rabshadaha ee ka socda xarunta Capitol ee Maraykanka ilaa Arbacadii.
Sidaana waxa sheegay saraakiil ka tirsan waaxda Gobolka.
Muuqaalka shaashadaha laga daawaday ee ka dhacay Capitol Arbacadii wuxuu ahaa dhammaadka bilihii dadaal ay wadeen Trump iyo xulafadiisa, si guud iyo si gaar ahba, si loo rogo natiijooyinka doorashada 2020.
Qaar ka mid ah dadaaladaa waxay ku salaysnaayeen sheegashooyin aan la caddayn oo ah tirinta codadka khiyaanada, halka kuwa kale lagu aasaasay waxyaabo mala awaal ah.
Trump ayaa si gaar ah diirada u saaray doorka Pence, isaga oo si cad cadaadis ugu saaray madaxweyne ku xigeenkiisa maalmihii la soo dhaafay – oo ay ku jiraan markii uu la hadlay taageerayaashiisa Arbacadii – si uu u taageero dadaalkiisa ku aaddan ka noqoshada natiijooyinka doorashada 2020.
Pence, in kastoo, uu sheegay Arbacadii in aannu lahayn awood uu ku beddelo natiijada doorashada ama uu si keli keli ah dib ugu dhigo shahaadada guusha Biden.
kacdoon wadayaashii carqaladeeyay shahaadada codbixinta doorashada ayaa sidaa yeelay kaddib markii Trump la hadlay, kana dalbaday inay la dagaallamaan “joojinta xatooyada” doorashada – sheegasho been ah – oo ay ku soo degaan Capitol.
“Intaas kaddib, waanu soconaynaa – waanan kula joogi doonaa – waanu socon doonnaa, waxaan u socon doonnaa Xarunta Capitol,” ayuu Trump yidhi Arbacadii hore.
Wuxuuna raaciyay, “innaguna Waxaan ku faraxsanaan doonaa Senatarradeena geesinimada leh iyo xildhibaanadayada iyo haweenka, waxaana laga yaabaa in aanan wax badan farxad u muujin doonin qaar ka mid ah. ”
Markii ay dadwaynuhu hoos ugu degeen Capitol, Trump inta badan wuu aamusnaa mana uu soo saarin hadalo baahsan oo uu ku cambaaraynayo rabshadaha, ama iskudayada lagu joojinayo.
Mar kale ayuu bartiisa Twetter-ka soo dhigay muuqaal kooban oo uu ku celcelinayo sheegasho – isagoo wax caddayn ah u haynin – oo la xidhiidhka wax isdabamarinta codbixiyayaasha iyo doorashada la xaday, isagoo yidhi “waan ku jecel nahay” dadkii ka soo degay Washington kuna booriyay inay guryahooda qabtaan.
Goor dambe oo Arbacadii ah, ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray “kuwani waa waxyaabaha iyo dhacdooyinka dhaca marka guusha aqlabiyadda leh ee doorashada si aan macquul ahayn iyo si xun looga xayuubiyay waddaniyiin waaweyn oo si xun iyo caddaalad darro loola dhaqmay muddo dheer.”
Twitter-ka ayaa markii dambe dalbaday in meesha laga saaro qoraalka iyo muuqaalka, waxaana barxadda si ku meel gaar ah loo xidhay akoonka madaxweynaha, iyadoo loogu hanjabay in si joogto ah loo joojinayo.
Dhiniciisa, Biden wuxuu ugu baaqay madaxweynaha inuu ku amro taageerayaashiisa inay soo afjaraan wax uu ku tilmaamay “weerrar aan horay loo arag” oo lagu qaaday dimuqraadiyadda “xuduudaha kacdoonka.”
“Waxaan ugu baaqayaa madaxweyne Trump inuu hada aado telefishanka qaranka si uu u oofiyo dhaartiisii uuna difaaco dastuurka una dalbado in la joojiyo go’doomintaas,” ayuu Biden ku yidhi hadaladiisa kooban.
Madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale soo jeediyay in Trump uu eeddaha lahaa qalalaasaha, isagoo yidhi “sida ugu fiican, hadalka madaxweynaha wuu dhiiri gelin karaa. Markay ugu xun yihiin, way kicin karaan.”
Markii fowdadu bilaabantay, qaar ka mid ah Aqalka Dimuqraadiga ayaa ku baaqay in mar labaad la rido madaxweynaha inta lagu jiro labadii toddobaad ee ugu dambeeyay xafiiska.
Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Minesota ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay in ay diyaarinayso qodobo xil ka qaadis ah. “Uma oggolaan karno inuu sii joogo xafiiska, waa arrin ilaalinaysa jamhuuriyaddeenna,” ayay qortay.
Rhode Island Rep. David Cicilline wuxuu madaxweynaha ku dhaleeceeyay rabshadihii baabi’iyay Capitol wuxuuna yidhi, “Waa inaan xukunno oo aan xukunno berrito.
Kaaliyaha afhayeenka Katherine Clark, D-Mass. Waxay madaxweynaha ugu yeedhay “khaa’inul waddankeena iyo Dastuurkeenna” waxayna ku baaqday in laga qaado xafiiska “lagana hor istaago inuu khatar dheeraad ah geliyo dalkeenna iyo dadkeenna.”
Trump sidoo kale wuxuu la kulmay dadka dhaleeceeya xisbigiisa dhexdiisa doorka uu ka qaatay soo kicinta dadka.
“Waxa maanta dhacay ma ahayn wax ka yar isku daygii afgambi. Madaxweynaha Maraykanka wuxuu been u sheegayaa taageerayaashiisa macluumaad been ah iyo filashooyin been ah,” ayuu yidhi wakiilka Pennsylvania Brian Fitzpatrick qoraal uu soo dhigay twitter “Wuxuu shiday ololkii kicinta mas’uuliyadana isagaa iska leh tan.”